Qeybta 1: Waa maxay Apple Music, iCloud Music Library, Lugood Kulanka?
Qeybta 2: Sidee Apple Music, iCloud Music Library, Lugood Kulanka wada shaqeeyaan?
Apple Music sida aynu wada ognahay waa adeeg geeyo music bixiyeen ay Rafaa Apple Inc. iyo dadka isticmaala dooran kartaa music for hoorto on qalabka ay. Xidhid Apple Music waxaa ka mid ah Beats 1, raadiyaha internet-ka iyo Apple oo ay la socdaan Connect, madal blog tahay farshaxan si ay taageerayaasha ay la wadaagi karaan warbaahinta. Talooyinka Music sidoo kale la siiyaa by Apple oo ku salaysan dhadhankii users iyo Apple Music waxaa la dhexgeliyey amarrada cod Siri.
iCloud Music Library waa eray asal Apple oo dhan oo music aad ku kaydsan iCloud.
itune Kulanka ayaa dhanka kale waa mid ka mid ah daruur adeegyada Apple ee fadhigiisu yahay music oo aad gali kartaa 25,000 oo heeso ka maktabadda music itune la Lacagtaas oo dhan $24.99 halkii sano ah oo daruur ah oo markaas qulquli oo iyaga ka soo dejisan in ilaa iyo 10 aaladaha kuwaas oo ka diiwaan gashan la.
Apple Music waa caan ah oo xaqiiqda ah in uu leeyahay heeso badan oo ay soo saarney iyo iCloud Music Library waa sida ay albatross qolka. iCloud Music Library ayaa soo dumaya ka dhacay tan iyo markii la bilaabay ka mid ah dadka isticmaala ay inta badan sababtoo ah waxa ay kuu ogolaanaya in aad ku darto heeso aad jeceshahay iyo playlists oo ka soo jeeda buugga rukun si aad maktabadda; kuwan raadkaygay kuwaas oo sidoo kale loo offline ciyaari karo.
iCloud Music Library u shaqeeya labada macnaha in aad heshiiska u Lugood Match ama Apple Music, oo dhan music aad ku kaydsan ee iCloud joogo iCloud Music Library.
Sidee Apple Music, iCloud Music Library iyo Lugood Kulanka wada shaqeeyaan?
Apple ay website ayaa ku tilmaamay Lugood kulanka iyo Apple Music sida codsiyada music madax banaan, laakiin sharfo dadka midba midka kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira muujinta a saddexaad in si dhow ula isku xira labadan viz. iCloud Music Library.
iCloud Music Library wax ku ool ah lagu daro Lugood kulanka, oou isticmaala playlist iyo maktabadda Lugood laga heli karaa xitaa download fog fog ama kuwo liita. Tareenka waa la dooxi karaa CD ah, ka iibsaday dukaanka Lugood ama laga keeno qalab kale oo qaar ka mid ah; oo dhan u noqon lahaa socon maktabadda Lugood.
Haddii Lugood Kulanka waa awoodi wayday inay hesho hees ku servers Apple, alaha nuqul user ayaa si fudud oo heesaha waxaa lagala soo bixi si la mid ah. Heeso kulan ayaa dhanka kale waxaa la soo bixi sida faylasha ACC aan DRM.
Isla-nimo oo dadka isticmaala kuwaas oo heshiiska u Music Apple laakiin waxaad u baahan tahay in ay sii tallaabo. Mararka ee macaamiishu Apple Music, ay u adeegsan kartaa Music iCloud Maktabadda ay ku daray tareenka maktabadda Lugood gal oo waxaan iyaga ku badbaadin for offline dhegeysiga. Habkaani waa la heli karo xitaa iyada oo aan Music Apple guud ahaan qalabka kala duwan laakiin kaliya ay dhacdo Lugood iibsadaan.
Faraq kale oo muhiim ah waa in track kasta oo uu soo dhigmaan Apple Music helo DRM marka wadada la soo bixi by users ku saabsan qalab kala duwan ama marka track asalka uu tirtiray ka Lugood Library isticmaala. Tani waxay dhacdaa iyada oo sababtu tahay Apple ee technology in uu qorsheynayo in uu hubiyo in mar users Times ay baajiso, iyagu ma ay awoodaan in ay dhawraan tareenka waxay ku badbaado u dhagaysto offline, laakiin ma uusan asal ahaan iska leedahay.
Files kulan yihiin oo mar walba noqon doonto DRM lacag la'aan ah qof heshiiska labadaba Lugood kulanka iyo Apple Music.
Marka la barbar dhigo, Apple Music waa ka qaalisan Lugood Kulanka oo uu qiimihiisu $14.99 bishii qorshaha lix qof qoyska iyo $ 9.99 bishiiba dhegeyste shakhsiga ah. Lugood Kulanka ayaa dhanka kale kharash $24.99 sannadkii hore u soo sheegnay in kastoo aadan haysan inay helaan Apple Music ee buugga iyo-dem.
Lugood kulanka iyo Apple Music Labada taageeraan maktabadaha shakhsi ahaaneed ee A.villa 25,000 songs kasta oo Lugood iibsadaan kuma jiraan in this. Xadka u badan tahay in ay koraan in ay 1,000,000 markii macruufka 9 waxaa lagu sii daayay dayrta.
Marka iCloud Music waxaa ka Mac soo jeestay, waxa lagu lafaguraa music oo dhan si aad u hubiso in ay jiraan waa hees ku habboon in Lugood Music Store ama buugga Apple Music ah sida laga yaabaa in kiiska. Haa haddii ay tahay wadada, ka dibna waxa aanu geliyaan tareenka gacanta si iCloud Music Library laakiin kulan aad heeso la kuwa ku sugan Music Apple ama buugga Lugood Music Store. Marka aad sii qulquli ama dib-u-soo bixi song in qalabka ah in ay leeyihiin ma waxa lagu kaydiyaa degaanka, waxaad kala soo bixi version ay bixiyaan Apple Music ama Lugood Music Store.
Haddii track ka maktabadda waa inaan laga helin oo ay soo saarney, ka dibna wadada waxaa gacanta uploaded in iCloud Music Library sida ay tahay. Sida song la dib-u-soo bixi in qalab kala duwan, waxaad ka heli version asalka qaab ACC ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in iCloud ma aha adeegga gurmad ah oo aad siin lahayd nuqul ka mid ah ayaa daruurtii ka dhex raadkaagu. Apple Music waxaa loo isticmaali karaa iyada oo aan iCloud Music Library sidoo.
Top 15 kale oo si Myxer Ringtones
> Resource > Music > Apple Music vs. iCloud Music Library vs. Lugood Match